Location: Mbido » Ịdee » Mmekọrịta » WTTC Global Summit 2022 Manila yigharịrị
Kansụl njem njem na njem nlegharị anya nke ụwa (WTTC) kwupụtara ụbọchị ọhụrụ maka nzụkọ 2022 ya na Manila.
Na 2021 WTTC mere nnọkọ njem nlegharị anya mbụ n'oge ọrịa COVID na Cancun, Mexico.
Edere Manila ka ọ bụrụ ebe mmemme 2022.
Taa Julia Simpson, Onye isi oche WTTC na onye isi ala kwuru, sị: “Ka mba dị iche iche gburugburu ụwa na-amalite imeghe ụzọ njem, anyị ekpebiela ịhazigharị Mgbakọ Mba Nile n'ime obere izu ole na ole. Nke a ga-enyere ọtụtụ ndị sonyere mba ụwa aka isonyere anyị na Manila ma nyere aka na-eduzi ma na-eduzi ngalaba ahụ ka anyị na-aga n'ihu na mgbake akụ na ụba.
“Mgbakọ zuru ụwa ọnụ anyị bụ ihe omume njem na njem kacha emetụta na kalenda. Anyị na-atụ anya ịhụ ka ndị otu anyị, ndị isi ụlọ ọrụ na ndị isi gọọmentị gbakọtara na Manila n'April iji gaa n'ihu na mbọ anyị na-eweghachi njem mba ụwa n'enweghị nsogbu. "
Bernadette Romulo-Puyat, odeakwụkwọ nke ngalaba njem nlegharị anya nke Philippines kwuru, "Nzukọ zuru ụwa ọnụ WTTC ga-abụ ohere dị ịrịba ama nye anyị iji gosipụta nkwadebe ndị anyị tinyeworo maka imepe emepe ndị ọbịa mba ụwa.
“Njem njem na-enye anyị ohere na-adịghị agwụ agwụ. Imeghe ebe anyị na-aga na ókèala anyị n'etiti ọrịa na-efe efe dị oke mkpa iji kwado ndụ nke nde mmadụ ndị dabere na njem na njem nlegharị anya. Anyị na-atụ anya ịbụ onye ọbịa gị nwere amara na Manila ka anyị na-eme njem na-esote nke ọma na ụlọ ọrụ njem. "
A ga-akwado nzukọ a na Metro Manila n'onwe Eprel 20-22, 2022, yana ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ na-esonye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.
A ga-ekwupụta ozi ndị ọzọ dị ka ndị isi okwu n'oge na-adịghị anya.
Ọzọ na: Philippines | Manila | Covid | Tourism | Metro Manila